Oziọma taa 14 Septemba 2020 na okwu Pope Francis | Blọọgụ nke ekpere
Oziọma taa 14 Septemba 2020 na okwu Pope Francis
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 14, 2020 Septemba 15, 2020
Site n'akwụkwọ nke Nọmba
N'oge ahụ, ndị mmadụ enweghị ike ịnagide njem ahụ. Ndi Israel we kwue okwu megide Chineke, megide kwa Moses, si, N'ìhi gini ka unu meworo ka ayi si n'Ijipt rigota ib killu ayi n'ọzara nka? N'ihi na ebe a enweghị achịcha ma ọ bụ mmiri na anyị na-arịa ọrịa nke ìhè a ».
Jehova we zite agwọ ahu nke n burningre ere n'etiti ndi Israel, ha we ta ndi Israel aru; ọtutu ndi Israel we nwua.
Ndi Israel we biakute Moses, si, Ayi emehiewo, n'ihi na ayi ekwuwo okwu megide Jehova, megide kwa gi; Onyenwe anyị na-arịọ arịrịọ ka anyị wepụrụ anyị agwọ ndị a ». Moses ama ọbọn̄ akam aban̄a mmọ.
Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Tẹ mu sụkwa agwọ; onye ọ bụla tara bitụrụ wee lee ya anya, ọ ga-adị ndụ ”. Moses we me agwọ ọla, tukwasi ya n'ọkọlọtọ ahu; mgbe agwọ tara mmadụ, ọ bụrụ na ọ na-ele agwọ ọla ahụ anya, ọ na-adị ndụ.
Jn 3,13: 17-XNUMX
N'oge ahụ, Jizọs gwara Nikọdimọs, sị:
Ọ dighi onye ọ bula rigoworo n’elu-igwe, ma-ọbughi Onye siri n’elu-igwe ridata, bú Nwa nke madu. Ma dika Moses weliri agwọ n'ọhia, ọbuná otú a aghaghi iweli Nwa nke madu elu: ka onye ọ bula nke kwere we nwe ndu ebighi-ebi na ya.
Mgbe anyị na-ele obe, anyị na-eche maka Onye-nwe na-ata ahụhụ: ihe a niile bụ eziokwu. Mana anyị na-akwụsị tupu anyị erute n’etiti eziokwu ahụ: n’oge a, ị dị ka onye mmehie kachasị ukwuu, I mewo onwe gị mmehie. Anyi aghaghi iji anya anyi lee anya n’elu obe n’elu oku a, nke bu nke kachasi ezi, o bu oku mgbaputa. N'ime Jisos mere nmehie anyi huru oke mmeri nke Kraist. Ọ naghị eme onwe ya ka ọ nwụọ, ọ naghị eme ka ọ ghara ịta ahụhụ, naanị ya, gbahapụrụ ... "Nna, gịnị kpatara ị hapụrụ m?" (Cf Mt 27,46; Mk 15,34). Ọ dịghị mfe ịghọta nke a ma, ọ bụrụ na anyị echee, anyị agaghị enwe nkwubi okwu. Naanị, tụgharịa uche, kpee ekpere ma nye ekele. (Santa Marta, 31 Machị 2020)
← Na post gara aga Gara aga post:Mbuli nke Holy Cross, oriri nke ụbọchị maka 14 Septemba
Ọzọ Post → Post ozo:Pope Francis: Tinye mgbaghara na ebere na etiti ndụ gị